I-Oshkosh Oasis - Ilungele ukuhlala kwesikhathi eside! - I-Airbnb
I-Oshkosh Oasis - Ilungele ukuhlala kwesikhathi eside!
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Aaron
U-Aaron uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Aaron izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Isemgwaqweni othulile, indawo yethu iseduze ne-Downtown futhi isuka e-Lake Winnebago! Imithwalo yokukhanya kwemvelo emafasiteleni angaphambili usuku lonke, kuyilapho umoya omuhle usuka echibini ungena.
Uzothola amasevisi okuzijabulisa kuyo yonke indlu. I-SmartTV 's kuwo wonke amagumbi, izibani zasekhaya zivuliwe, ne-Nest thermostat ukuqinisekisa ukuthi uhlala ukhululekile phakathi nokuhlala kwakho. Ikhishi eligcwele, ihhovisi elithokomele, indawo enhle, nokucabangela okukulindile phakathi nokuhlala kwakho!
Osofa abanoboya obuluhlaza okwesibhakabhaka, izindawo zaphansi ezinhle zokhuni, kanye nefenisha ehlukile zikulindile kule yunithi ephansi enakho konke ongakuthola ekhaya! Indawo yokuwasha isendaweni engaphansi futhi iyisevisi ehlanganyelwayo enezitezi eziphezulu. Uma isivalo siphelile - asisebenzi futhi sivulekile ukuba uwashe!
Indlu ime emgwaqweni othulile, uhhafu wesivalo echibini i-Winnebago. Kutholakala cishe emabhulokhi angu-6 ukusuka e-Menomonee Park okuyizindlu zemizila yokuhamba ende ezungeze ichibi ne-Millers Bay kanye ne-zoo yethu yendawo! Umzila webhasi uyingxenye yokuvimba emgwaqweni olandelayo wokunqamula. Eduze kwedolobha, nezindawo eziningi ezithandwa kakhulu e-Oshkosh!
Sihlala e-Fort worth, TX - Futhi leli yikhaya lethu lesibili. Nginomphathi wendlu otholakalayo uma kudingeka.